Drove Medical Chifambisa Wiricheya - Drove Medical Wiricheya
Isu tinopa dzimwe nzira dzeDrove Mawiricheya.
Tinopa wiricheya yemawoko dzimwe nzira dzeDrove Medical hwiricheya, dzinogara kwenguva refu, dzinoshanda zvakanaka, uye dzinodhura.
Tinopa kumira Mawiricheya zvinopa zvinodiwa nevakawanda hwiricheya vashandisi, sarudzo yehupfumi yekumira uye simba Mawiricheya.
senga Mawiricheya kana Zvifambiso Zvigaro shamwari Mawiricheya uko chinangwa chiri chekuti shamwari isundidzire mushandisi.
Iyo Yakareruka wiricheya yemawoko kusimudzira kukuru pamusoro pehuremu hwiricheya izvo zvinogona kukonzera kuti mamiriro ako awedzere uye zvinogona zvakare kutungamira kune mamwe matambudziko epanyama.
Nderupi Rudzi rweDrove Medical hwiricheya Zvakandinakira?
Rudzi rwe hwiricheya kune zvaunoda zvezuva nezuva.
Drove Medical Zvikamu